Забур 116 CARS - Nnwom 116 AKCB
1Medɔ Awurade efisɛ, ɔtee me nne.
Ɔtee me mmɔborɔsu.
2Esiane sɛ ɔbrɛɛ nʼaso ase maa me nti,
mɛfrɛ no wɔ bere a mete ase yi.
3Owu ahama bebaree me,
ɔda ho yawdi baa me so,
ɔhaw ne awerɛhow hyɛɛ me so.
4Afei mebɔɔ Awurade din kae se,
“Awurade, gye me nkwa!”
5Awurade yɛ ɔdomfo ne ɔtreneeni;
ayamhyehye ahyɛ yɛn Nyankopɔn ma.
6Awurade bɔ ɔwɛmfo ho ban;
bere a mewɔ ahohia mu no, ogyee me.
7Nya abotɔyam bio, me kra,
efisɛ Awurade ne wo adi no yiye.
8Na wo, Awurade, woagye me kra afi owu mu;
woamma mʼani amporow nisu,
na woamma mʼanan anhintiw
9sɛ mɛnantew Awurade anim
wɔ ateasefo asase so.
10Migye dii; ɛno nti mekae se,
“Mewɔ ahohia kɛse mu.”
11Na mʼahokyere mu mekae se,
“Nnipa nyinaa yɛ atorofo.”
12Dɛn na metumi de atua Awurade ka
wɔ ne papa a wayɛ me nyinaa?
13Mɛma nkwagye kuruwa no so
14Medi bɔ a mahyɛ Awurade no nyinaa so
wɔ ne nkurɔfo nyinaa anim.
15Awurade nkoa nokwafo wu
som bo wɔ Awurade ani so.
16Awurade, ampa ara meyɛ wo somfo;
meyɛ wo somfo, wʼafenaa babarima;
woayi me afi me mpokyerɛ mu.
17Mɛbɔ aseda afɔre ama wo
18Medi me ntam a maka Awurade no so
wɔ ne nkurɔfo nyinaa anim,
19wɔ adiwo a ɛwɔ Awurade fi no,
wɔ wʼanim, Yerusalem.
AKCB : Nnwom 116